I-42% yeBrits iyakuthathela ingqalelo ukuya kwiholide eSaudi Arabia
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » I-42% yeBrits iyakuthathela ingqalelo ukuya kwiholide eSaudi Arabia
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iintlanganiso • iindaba • abantu • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK
ISaudi Arabia iqhube iphulo eliyimpumelelo lokhenketho lwasekhaya ngo-2020, kwaye amanani abakhenkethi kulindeleke ukuba aqhubeke ngakumbi ngokuphinda kuqalelwe uhambo lwamazwe ngamazwe.
Ushishino lwezokhenketho lwaseSaudi Arabia lusekwe ukuba lubuyele kwindlela yokufikelela usukelo lwalo lwamabhongo, njengoko abane kwi-10 Brits bathi baya kuqwalasela iholide ebukumkanini, ibonisa uphando olukhutshwe namhlanje (ngoMvulo we-1 kaNovemba) yi-WTM yaseLondon.
Indawo ekuyiwa kuyo iza kubona ukonyuswa kwizicwangciso zayo kule veki njengoko inkitha yeenkampani zokuhamba zithi kusenokwenzeka ukuba zisayine izivumelwano zoshishino kunye neefemu zaseSaudi Arabia eWTM London, eqala namhlanje kwaye iqhubeke de kube ngoLwesithathu we-3 kaNovemba.
Umbono onethemba uvela kwiziphumo zophando ezimbini zeWTM yaseLondon, enye eyenziwa phakathi kwabathengi baseBritani kunye nezinye iingcali zorhwebo zokuhamba ngamazwe ngamazwe, ezenza iNgxelo yoShishino lweWTM.
I-poll yabathengi be-1,000 ifumene i-42% yabantu abadala base-UK baya kucinga ukuya kwiholide e-Saudi Arabia. Enye i-19% yathi ayinakwenzeka kodwa inokucengwa.
Uvavanyo lweengcali zorhwebo ezingama-676 ezisuka kumazwe kwihlabathi liphela zifumanise ukuba ngaphezulu kwesiqingatha (51%) bebeceba ukuba neengxoxo zoshishino namashishini aseSaudi eWTM eLondon kule veki.
Yayiyeyona ndawo ikhankanyiweyo kakhulu, ngaphambi kwe-Italiya kwindawo yesibini (48%) kunye neGrisi (38%).
Abaphenduli zorhwebo baphinde bathi banokuthi basayine izivumelwano kunye neenkampani ezivela eSaudi Arabia, kunye nelizwe elifumene i-3.9 kwabahlanu - kwakhona, eyona nto inokwenzeka kwi-poll.
Ngaphaya koko, i-40% yabaphenduli bathe kungenzeka (30% ilindeleke kakhulu; i-10% inokwenzeka) ukuba bavumelane nekhontrakthi kunye neSaudi Arabia/imibutho yaseSaudi Arabia eWTM London.
Ubukumkani buye banyusa umsebenzi wabo wokurhweba ngo-2021 emva kokuvalwa kwe-2020.
Phambi kowama-2019, ii-visa zokhenketho eSaudi Arabia zazikhawulelwe ikakhulu kubahambi bezoshishino, abasebenzi abasuka kwamanye amazwe kunye nabahambi ngezonqulo ababetyelela izixeko zaseMecca naseMedina.
Ilizwe livule imida yalo kubakhenkethi bamazwe ngamazwe ngokuphehlelelwa kwenkqubo yalo ye-e-visa ngoSeptemba wama-2019.
Nge-1 ka-Agasti ka-2021, iSaudi Arabia yamkele abakhenkethi emva kweenyanga ezili-18 emva kokuba ukhenketho lunqunyanyisiwe ngenxa yobhubhani we-Covid-19.
Lizibekele amabhongo ekujoliswe kuko kubakhenkethi abazizigidi ezili-100 ngowama-2030, njengenxalenye yeenzame zokuhluza uqoqosho ngaphaya kwamafutha efosili.
Kanye nokuba likhaya leMecca kunye neMedina, izixeko ezibini ze-Islam, ilizwe liphuhlisa "iiprojekthi ze-giga" ukuphuhlisa ilifa lobukumkani, inkcubeko kunye nempahla yendalo kunye neepaki zemixholo kunye neendawo zokungcebeleka zodidi.
Abanini-zithuthi abafana noHlolo ngoku banikezela ngabakhenkethi abakhaphayo kweli lizwe kwaye icandelo labo lokuhamba ngenqanawa liyaphuhla nalo-i-MSC Cruises kunye ne-Emerald Cruises ziceba ukusebenzisa iindlela zohambo ezineSaudi Arabia kwiinyanga ezizayo.
Kwaye isixeko sase-Saudi Arabia sase-AlUla siqalise i-hub yorhwebo yokuhamba kunye neqonga loqeqesho lwe-intanethi ukunceda ukwakha ulwazi ngendawo ekuya kuyo phakathi kwee-arhente zokuhamba zase-UK.
UFahd Hamidaddin, uMlawuli oyiNtloko weGunyabantu lezoKhenketho laseSaudi uthethe neengcali kushishino lokhenketho kwi-ATM ka-2021 – umsitho ongudade we-WTM yaseLondon.
Uthe iSaudi Arabia iqhube iphulo eliyimpumelelo lokhenketho lwasekhaya ngo-2020, kwaye amanani abakhenkethi kulindeleke ukuba aqhubele phambili ngokuphinda aqalise uhambo lwamazwe ngamazwe.
Kanye nokuphuhlisa iziqinisekiso zabo zokhenketho, ubukumkani butyala imali kwimidlalo yehlabathi ukuphakamisa iprofayile yabo.
Ngo-2019, yabamba umlo ka-Anthony Joshua we-heavyweight wehlabathi kwaye iza kubamba umdyarho wayo wokuqala weGrand Prix kwinyanga ezayo (ngoMnga ka-2021) kwisixeko saseJeddah.
USimon Press, uMlawuli weMboniso weWTM eLondon, uthe: "Kuya kuba kukhuthaza kakhulu kwigqiza laseSaudi eWTM eLondon ukufunda iziphumo ezilungileyo kubathengi bethu kunye novoto lokuhamba. Bobabini bacebisa ukuba utyalo-mali olukhulu kukhenketho sele luhlawula izabelo, kwaye izivumelwano eziya kwenziwa kwi-WTM yaseLondon ngokuqinisekileyo ziya kunceda indawo ekuyiwa kuyo ukuze ifikelele usukelo olunqwenelekayo. "